कमाइको 'निश्चित रकम' अब आमा–बाबुको बैंक खातामा जम्मा गर्लान त छोराछोरीले ? | News Nepal
कमाइको ‘निश्चित रकम’ अब आमा–बाबुको बैंक खातामा जम्मा गर्लान त छोराछोरीले ?
काठमाडौँ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा नियमित रूपमा पारिश्रमिक बुझ्ने व्यक्तिले आमा बाबुका लागि मासिक निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थप गर्दै ऐन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा अब छोराछोरीले आमा बाबुका लागि निश्चित रकम मासिक रूपमा बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ८ हेरफेर गरी सो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो। दफा ८ क० थप गर्न गरिएको प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक आयको निश्चित प्रतिशत रकम आमा बाबुको नाममा बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नु पर्नेछ।